देउवाको जनविरोधी कदमको असर : ३० वर्ष देखि भूमिहिनको समस्या उस्तै, १ लाख भूमिहिनले जग्गा लिनै लाग्दा आयोगनै खारेज ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
देउवाको जनविरोधी कदमको असर : ३० वर्ष देखि भूमिहिनको समस्या उस्तै, १ लाख भूमिहिनले जग्गा लिनै लाग्दा आयोगनै खारेज !
३० वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको समस्या सामाधान हुन सकेको छैन । भूमि हिनलाई भूमि दिनका लागि गठित भूमि आयोगनै वर्तमान शेर बहादुर देउवा सरकारले काम सहज हुने अवस्था आएपछि आयोगनै खारेज गरिदियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले भूमिहिनको पक्षमा जनपक्षीय काम गरेको थियो । पात्र परिवतर्न गर्नुपर्नेमा आयोगनै खारेज गर्नु गलत भएको छ ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका लागि १५ हजार लालपूर्जा बाँड्ने तयारी गरिरहेको भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग नै खारेज भएको छ । राजनीतिक कोपभाजनमा परेर आयोग नै खारेज भएपछि १४ महिनाको अवधिमा आयोगले गरेको सबै काम र बजेट खेर गएको छ । तीन वर्षे समयावधि तोकिएको आयोगले यो अवधिमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीका अनुसार साउन मसान्तभित्र जग्गा वितरण गर्ने गरी आयोगले काम अघि बढाएको थियो । तेह्रथुम, दाङको बबई, पाल्पाको रामपुर, झापाको कन्काई लगायत ठाउँमा जग्गा वितरणको सूचना प्रकाशत गर्ने अन्तिम तयारीमा आयोग थियो । उनका अनुसार जिल्ला कार्यालयमा लालपूर्जा तयार भइसकेका छन् । साउन मसान्तमा १५ हजार लालपूर्जा एकै पटक बाँड्ने भनेर तयारी अवस्थामा रहँदै सरकारले आयोग नै खारेज गरेको उनले बताए ।
काम गरेर नतिजा आउने समयमा आयोग खारेज हुनुमा यो सरकारमाथि नै शंका गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार आयोगले स्थानीय तहहरूलाई कामको आधार बनाएको थियो । स्थानीय तहले नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने, उजुरी लिने, जग्गाको नाप र व्यवस्था गर्नेसम्मको काम गर्ने प्रवक्ता कार्की बताउँछन् ।
१२ लाखले भरेका थिए फारम, नौ हजार विघाभन्दा बढीको नापी
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने अन्तिम निर्णय भने आयोगले गर्छ । ‘यसै आधारमा आयोगले देशभरका सात सय ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौैता गरेको थियो ।’ उनी भन्छन्, ‘सम्झौता बमोजिम स्थानीय तहहरूले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर टोलटोलमा लगत संकलनको काम गरिरहेका थिए । त्यसमध्ये तीन सय १९ स्थानीय तहको लगत संकलनको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’
लगत संकलन गरिएका स्थानीय तहबाट १२ लाखले फारम भरिसकेका थिए । त्यसमध्ये दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० भूमिहीन सुकुम्बासी र नौ लाख ३२ हजार आठ सय एक जना अव्यवस्थित बसोबासीको फारम थियो । यसबाहेक करिब पाँच लाख फारम अन्य स्थानीय तहहरूमा वितरण भएको छ । त्यसको नतिजा केही दिनमा आउने तयारी थियो ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार दुई सय २२ स्थानीय तहमा कम्प्युटर प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ । यसमा फारम भर्ने हरेक व्यक्तिको विवरण आउँछ । कतैबाट नाम दोहोरिएमा या नागरिकता नम्बर, फारम नम्बर इत्यादी जुधेमा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्न मिल्दैन ।
यसैगरी एक सय १४ स्थानीय तहमा आयोगले ६ सय १८ जना नापीका प्राविधिकबाट जग्गा नापीको काम अघि बढाइरहेको थियो । अहिलेसम्म ९ हजार बिघा भन्दा बढी जग्गा नापिसकेको छ । काम अवरोध नगरिदिएको भए साउन मसान्तभित्र १५ हजार, भदौ मसान्तभित्र ३५ हजार र असोज मसान्तभित्र ५० हजार पुर्जा बाँड्ने गरी काम भइरहेको थियो । यी सबै गरेर असोजसम्ममा एक लाख लालपूर्जा बाँड्ने आयोगको तयारी थियो ।
आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाका अनुसार पहिलो चरणमा सुकुम्बासीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने योजना थियो । सुकुम्बासीलाई आवासका लागि एक कठ्ठा र खेतीको लागि करिब ६ कठ्ठासम्म जग्गा दिनेगरि तयारी भइरहेको उनले बताए ।
आयोगका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार अघिल्लो सरकारले निकालेको आंकडाले नेपालभर सात लाख सुकुम्बासी रहेको बताएको थियो । तर, अहिलेको आंकडा हेर्दा सुकुम्बासीको संख्या घटेको उनी बताउँछन् ।
कसैलाई ढाँटेर आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्नेको संख्याालई अहिले कानूनी बाध्यताले घटाएको उनको दाबी छ । ‘अहिले कसैले ढाँटेर फराम भर्छ भनेर उनीहरूलाई जरिवाना गर्ने र जग्गा खोस्ने प्रावधान राख्यौं,’ उनले भने, ‘झुटो ठहरिएको अवस्थामा कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु भनेर ल्याप्चे लगाउन लगाइन्छ । त्यसकारण अहिले सुकुम्बासीको फारम अहिले अत्यन्तै कम भरिएको छ ।’
अहिलेको आंकडा अनुसार सुकुम्बासीको तथ्यांक दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० छ । यसमा धेरै बढ्यो भने साढे तीन लाख भन्दा बढी नपुग्ने उनको दावी छ । यद्यपि, अहिले अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या भने बढेको छ । आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नौ लाख ३२ हजार आठ सय १ अव्यवस्थित बसोबासी दर्ता भएका छन् । यसमा अझै पाँच लाख थपिने आयोगको आंकलन छ ।
यो वर्ष आयोगले अव्यवस्थितलाई जग्गा विक्री गरेर साढे दुई खर्ब आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । विपन्न अव्यवस्थित बसोबासीलाई मालपोत मूल्यको ८ प्रतिशतमा जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी कार्यविधि तयार भएको थियो । धनी र सम्पन्नको हकमा त्यही अनुसार प्रतिशत बढाउँदै लैजाने र अति सम्पन्नलाई दुई सय प्रतिशत राजस्व लिएर जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘विचौलिया, जमिन्दार, सामन्त र दलालको प्रभावमा आयोग खारेज भयो, निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ’
महामारी र बाढीपहिरोको प्रकोपमा पनि आयोगले पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले काम गरिरहेका बेलामा आयोग खारेज गर्नु अत्यन्तै पूर्वाग्रही भएको कार्की बताउँछन् । ‘यसले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्सवस्थित बसोबासीमाथि प्रहार भएको छ । सरकारको यो निर्णयले उनीहरू कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैनन् ।’ उनले भने ।
उनी आयोग विघटनको असर राष्ट्रिय रुपमै पर्ने देख्छन् । ‘हामीले गरिबीको रेखामुनि भएका अत्यन्तै गरिब वर्गलाई सम्पत्तिको मालिक बनाउन खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन खोजेका थियौं । तर, यो सरकारले त कंगालको देश बनाउने भयो ।’
तर, आयोगले थालेको यो काम वर्तमान सरकारले देख्न नसकेको कार्कीको आरोप छ । ‘विचौलिया, जमिन्दार, सामन्त र दलाली हावी भए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण सरकारलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूले यो आयोग विघटन गरे । जनताको माग बुझ्ने हो भने यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा स्थायित्वको कुरा गर्ने सरकारले चालेको यो कदम उपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘अरु कुनै आयोगलाई नछुनु, यही आयोग पहिलै निमोठ्नुपर्ने कारण के ?,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को टोली गठन गरेर जहाँसम्म काम भयो त्यहाँबाट सुरु गरिदिए पनि हुन्थ्यो ।’
यो आयोग अब पुनः गठन गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा धेरै काम अघि बढिसकेको हुँदा नयाँ सरकार गठन भएपनि संस्था ब्यूँताउनेपर्ने उनले बताए । ‘धेरै स्थानीय तह संलग्न भइसकेको हुँदा यो काम रोकेर सम्भव छैन,’ उनले भने ।
३० वर्षमा पनि समाधान नभएको समस्या
सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण गर्न आयोग गठन भएको यो पहिलो होइन । पहिलो पटक ९ संसिर ०४७ मा पहिलोपटक सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन भएको थियो ।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको यो १३ औं आयोग हो । तर, आयोगमा बहाल भएका अध्यक्षको गणना गर्दा यो १६ औं आयोग हो ।
३० वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको समस्या सामाधान हुन सकेको छैन । विगतमा राजनीतिक संरचना र अस्थिरताका कारण पनि यस्तो समस्या भएको बताउँछन् देउजा । उनको विचारमा आयोग आफैं अस्थिर भएका कारण पनि समस्या सम्बोधन हुन सकेन । ‘अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश काम स्थानीय तहबाटै हुन्छन् । तर, काम सहज हुने अवस्था आएपछि आयोग खारेज भयो